'अ म्यूजिकल भ्लग'बाट कत्तिको आशावादी छन् सलिनमान बनियाँ? :: PahiloPost
'अ म्यूजिकल भ्लग'बाट कत्तिको आशावादी छन् सलिनमान बनियाँ?
8th February 2019, 05:23 pm | २५ माघ २०७५
काठमाडौं : फिल्म यात्रा 'अ म्यूजिकल भ्लग' प्रदर्शनको तयारीमा छ। फिल्ममा 'ए मेरो हजुर'बाट डेब्यू गरेका अभिनेता सलिनमान बनियाँ भ्लगरको भुमिकामा देखिँदैछन्।
उनी दोस्रो फिल्मबाट पनि आशावदी छन्। उनले भनेका छन् 'मैले चाहेकै किसमको भूमिकालाई यसमा निर्वाह गरेको छु। फिल्मले नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्धन गर्छ।' फिल्ममा समावेश दृश्यले दर्शकको आँखालाई सितलता प्रदान गर्ने उनी बताउँछन्।
फिल्मलाई सम्राट शाक्यले निर्देशन गरेका हुन्। फिल्मले मनोरञ्जनलाई केन्द्रमा राखेको उनले बताए। 'फिल्मको कथावस्तु यात्रामा केन्द्रित छ तर यसले पूर्ण रुपमा मनोरञ्जन दिन्छु', उनले भने 'फिल्ममा चाहिने सम्पूर्ण तत्व यात्रामा छ। फिल्मले यात्राको क्रम आउने परिस्थिति, माया र मित्रतालाई देखाउँछ।'
'अ म्यूजिकल भ्लग' सलिनसँगै सलोन बस्नेत, जान्वी बस्नेत, जय नन्द लामा, रेअर राई, प्रेक्षा बज्राचार्य, धिरेन शाक्य, राजाराम पौडेल, विशाल कटवाल, समृद्धि राई, योगेश जंग कुँवरलागयतको अभिनय छ।
फिल्ममा विदेशी कलाकारहरु चाइनाका जुन झाङ र केन्याका बबीको अभिनय रहेको बताइएको छ। कोटकी कालिका देवी फिल्म्स, क्रिएटिभ फिल्म प्रोडक्सन र हरि ओम सिने मेकर्सको ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्ममा संजय लामाको छायाँकन छ।
कविराज गहतराज र प्रविन सिंहको कोरियोग्राफी रहेको फिल्ममा हिमाल केसीको द्वन्द्व, बनिष शाहको सम्पादन छ। फिल्ममा संगीतकार शम्भुजित बास्कोटाकोसँगै प्रतिक पौडेल र कोविद बज्रको संगीत छ।
'अ म्यूजिकल भ्लग'बाट कत्तिको आशावादी छन् सलिनमान बनियाँ? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।